Zavatra 7 tsy maintsy ataonao any Amsterdam | Vaovao momba ny dia
Zavatra 7 tokony hataonao any Amsterdam
Maria Jose Roldan | | Amsterdam, tanàna
Betsaka ny olona maniry mankanesa any Amsterdam amin'ny dia Ary raha iray amin'izy ireo ianao dia mety mieritreritra hoe inona no daty mety indrindra hanombohana ny dianao. Ny olona mandeha any Amsterdam dia mahita fa toerana mahafinaritra ny mandeha tsy indray mandeha fotsiny, fa mamerina ny dia mihoatra ny indray mandeha sy indroa. Ho fanampin'izay, any dia hanana zavatra ho hitanao foana ianao ary raha tsy fantatrao izay azonao atao any mba hahafalifaly, dia aza misalasala manohy mamaky satria ho anao ity lahatsoratra ity.
Raha nankany Amsterdam ianao, dia mety tsy ho faritanao amin'ny teny tokana ny dikan'izany aminao, satria tanàna holandey tsy mampino izy ary mety efa nieritreritra ny hipetraka ao ianao. Raha mandeha any Amsterdam ianao dia tadidio ity lahatsoratra ity satria holazaiko aminao ny sasany zavatra tsy azonao adino atao, Ho tianao izany!
1 Manofa bisikileta ary mihetsika miaraka aminy
2 Manàna labiera ary mijery ny olona
3 Mihinana waffles
4 Mandehana any amin'ny distrika jiro mena
5 Aza adino ny maka sary miaraka amin'ireo litera «I Amsterdam»
6 Aza adino ny coffeeshops
7 Tsidiho ny trano Anne Frank
Manofa bisikileta ary mihetsika miaraka aminy
Raha tsy fanatika amin'ny bisikileta any Amsterdam ianao dia toa ianao izany, ... ho tia ny bisikileta ianao. Misy bisikileta ana hetsiny ara-bakiteny eny amin'ny arabe ary tian'ny olona izany. Ny fitadiavana bisikileta hofan-trano dia tsy ho olana satria hahita bisikileta manofa be akaikin'ny misy anao ianao - na aiza na aiza misy anao ao an-tanàna. Aoriana, Tsy maintsy averinao fotsiny ity mba hahafahan'ny olon-kafa mandray azy ho anao. Zava-dehibe amin'ny fahasalamanao ary koa amin'ny tontolo iainana ny bisikileta, koa… aza misalasala mandeha bisikileta.
Manàna labiera ary mijery ny olona
Zavatra tsotra toy ny fisotro labiera sy fandinihana ireo olona mandalo ao Amsterdam dia tena zava-dehibe mba hahafahanao mankafy ny tsiro sy ny tanàna. Na dia tsy olona tia labiera aza ianao dia manoro hevitra anao aho hiaina izany fahatsapana izany Ao amin'ny tanàna holandey, misy trano fisotro labiera lehibe sy matsiro, ohatra, dia misy ny foiben'ny Heineken International.
Na dia tsy tianao aza ny labiera dia azonao atao ny misafidy ny handeha hisakafo any amin'ny fisakafoanana ary hisotro kafe tsara, fa amin'ny fotoana mamaky boky dia azonao atao ny mandinika olona. Ny seza ivelany no tsara indrindra hahitanao ny fialan-tsasatra sy ny olona mijery avy eo amin'ny sezanao.
Raha misy zavatra tsy azonao adino atao any Amsterdam-indrindra raha tianao ny zava-mamy- dia ny mihinana waffle matsiro. Raha mandehandeha mamaky ny tanàna dia azo atao fa indraindray dia afaka mamofona hanitra mamy amin'ny zavatra mamy ianao ... ireo dia waffles ary tsy maintsy alaim-panahy ianao - raha tsy manana olana ara-pahasalamana ianao, indray mandeha isan-taona dia tsy maninona.
Ny waffles dia be mpitia eran'i Amsterdam ary misy karazany hafa mba hahafahanao mankafy ilay tianao indrindra. Caramel sy syrup no fangaro manokana. Fa ny malaza indrindra dia ny frezy frezy na nutella, tena matsiro tokoa!
Mandehana any amin'ny distrika jiro mena
Azoko antoka fa efa nandre momba ny Distrika Jiro Mena ianao ary tokony ho fantatrao fa izay rehetra henonao hatreto dia tena marina. Betsaka ny jiro mena mamirapiratra na aiza na aiza ary misy koa vehivavy eo am-baravarankely hitaona ny olona ho aiza. -ary manao firaisana amin'ny sarany-. Ka eny, marina izay rehetra henonao.
Fa raha mitady drafitra ianao amin'ny inona no hatao any Amsterdam Ilaina ny fitsidihana ity faritany ity hahitanao fa marina ny tantara rehetra henonao momba ny vehivavy sy ny jiro mena.
Aza adino ny maka sary miaraka amin'ireo litera «I Amsterdam»
Ireo taratasy ireo dia miorina ao amin'ny Rijksmuseum ary maneho fanambarana fampidirana ho an'ny mponina rehetra ao an-tanàna, na iza izy ireo na avy aiza. Ny fanekena ny olona rehetra, izay ny fandeferana no avo indrindra eo amin'ny fiaraha-monina. Ho hitanao fa mameno olona izy io satria te haka sary ny olona ary hita daholo ny litera, dia toy ny mariky ny firaisana izany eo amin'ny rehetra.
Aza adino ny coffeeshops
Raha mieritreritra ny hisotro kafe any amin'ny Starbuck ianao dia manoro hevitra anao aho mba hieritreritra indroa rehefa any Amsterdam ianao. Betsaka ny olona mankafy an'ity tanàna ity satria Amsterdam dia fantatra amin'ny fananganana ara-dalàna ny fanafody 'malefaka' toy ny rongony ary fivarotana kafe maro no navela nanomboka ny taona 1970.
Misy manodidina ny Coffeeshops 200 miparitaka manodidina an'i Amsterdam. Raha liana amin'ireo karazana toeram-pivoriana ireo ianao, dia mety ho liana amin'ny amina Cannabis Cup any Amsterdam ihany koa. Hetsika iray izay mampiseho karazana marijuana isan-karazany ary misy mpitsara mifidy izay tsara indrindra. Na dia tsy an'i Amsterdam irery aza ity hetsika ity, satria ankalazaina ihany koa izy any atsimon'i California, Denver, San Francisco ary Portland.
Tsidiho ny trano Anne Frank
Hevitra tsara foana ny misaintsaina ny habibiana natao tamin'ny vahoaka jiosy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa tao amin'ny trano Prinsengracht, izay niafenan'i Anne Frank sy ny fianakaviany tamin'ny Nazia nandritra ny roa taona taorian'ny fanenjehana tany Alemana. Ny eo an-trano ankehitriny dia tranombakoka mampieritreritra. Matetika dia maro ny filaharana satria maro ny olona liana hahafantatra ny tantara. Izany no antony anoroako hevitra anao handeha maraina maraina na hitahiry ny tapakilan'ny Internet.
Ireto no 7 amin'ireo zavatra tsy tokony hohadinoinao hatao any Amsterdam, saingy mazava ho azy, mbola betsaka ny zavatra hafa, toy ny fitetezana lakandrano ... ary tanàna feno fahafaha-manao izy ary hanampy anao hahita mahafinaritra toerana, miaraka amin'ny olona mahafinaritra sy amin'ny zoro maro mba hankafizany sy hahitana ny hakanton'ny tanàna iray, izay eken'ny rehetra ary ny fandeferana dia miharihary eny an-dalambe. Efa fantatrao ve hoe rahoviana no ho tonga ity tanàna tsara tarehy ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Zavatra 7 tokony hataonao any Amsterdam
Ankafizo i Wina ao anatin'ny telo andro
Jewels 5 anaty rano niely erak'izao tontolo izao